اموزش یک | Imbangela yokudangala – Yazi imbangela uyiphathe
Imbangela yokudangala – Yazi imbangela uyiphathe
Yini ebangela ukozela? Yini ebangela ukozela? Kungase kube nezimbangela ezahlukahlukene: ukuhamba ngendiza isikhathi eside, imisebenzi ephazamisa isigqi esijwayelekile sokulala, noma imisebenzi efana nokushayela isikhathi eside. Ngenkathi iningi lethu lingakunaki ukulala okugcwele, kunezinye izinkinga zokulala. Lokhu kufaka i-apnea yokulala, ukuqina kwemilenze okungazweli, nokuhlaselwa ukulala. Abantu abasebenza emathuneni noma imisebenzi yabo edinga amashifu baphenduka ubuthongo. Lokhu kungenxa yokudonsa kanzima ebusuku nokungakwazi kwabo ukulala ngokwanele emini.
Iningi labantu abadala lidinga ukulala amahora amabili kuya kwayi-4 ubusuku ngenxa yobuthongo. Ngenkathi ezinye zidinga okungaphezulu noma ngaphansi kwaleli nani ukuze imizimba yabo iphumule kahle. “Izinkinga zokulala, ukulala ngokwanele kanye nokulala kabi kungaba nemiphumela emibi,” kusho uSchweiz. Ukuntuleka kokulala kahle kuhlobene kakhulu nezinkinga ezinkulu zezempilo zesikhathi sethu. Izinkinga ezinjengomfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo, unhlangothi, isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile kanye nobuhlanya
Izimbangela Zokulala Uma amehlo akho avale ngokwanele kepha uzizwa ulele, ungahle ube nezinkinga zokulala. Izinkinga zokulala zifaka ukungakwazi komuntu ukulala noma ukuqhubeka nokulala noma isimilo sokuziphatha esingaziwa, njengokulala. Enye inkinga yokulala ingeyesikhashana, njengokuhlasela kokulala. Ngesikhathi sokuhlaselwa ukulala, umuntu ulala ngokungalawuleki usuku lonke. Lapho iziguli zivakashela umtholampilo kaDavila wokulala, okokuqala ufuna ukwazi ukuthi inkinga yiningi noma ikhwalithi yokulala kwakhe. “Umbuzo wokuqala odokotela abawubuza ngokulala kwabo ukuthi balale ngokwanele yini,” kusho yena. Ingabe bahlala belele ngokuphelele? Lo ngumbuzo obalulekile. Ngoba sikholwa ukuthi abantu abaningi banale nkinga. Bahlukane ngokwengxenye noma ngezikhathi ezithile futhi kwesinye isikhathi banokuqwasha okungapheli. ” UDavila ubheka ikhwalithi uma eqaphela ukuthi inkinga akuyona amaklayenti akhe, ukubona ukuthi unenkinga yokulala.
Izimbangela Zokulala Ngokusho kwe-Journal of the Journalists ‘Club Clinic, akuhlali njalo ngenxa yobuthongo nokukhathala, ukuntula ubuthongo noma ukusebenza ngokweqile. Kunezizathu eziningi ezingakwenza uzizwe ukhathele ngaso sonke isikhathi.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abalala amahora angaphezu kuka-9 ebusuku basengozini enkulu yezifo ezinjengoshukela kanye nokukhuluphala kunabanye.
Imbangela yokulala ngokweqile yisidingo esingokwemvelo, futhi umuntu ngamunye udinga amahora angama-6 okulala okusebenzayo ngosuku. Izibalo zikhombisa ukuthi u-1,6% wabantu emhlabeni uhlangabezana nokugula kokulala futhi lokhu kuyanda.
Izizathu ezi-4 zokukhathala nokudangala:
Izimbangela Zokungalali Kokulala: Yize ukutheleleka kunezimpawu eziningi ezisobala, kwesinye isikhathi zingasakazeka emzimbeni wakho ngaphandle kokuqaphela noma ukutholwa udokotela. Isibonelo, ekuphazamisekeni kwamasosha omzimba, ukutheleleka kungaqala ukukhathala okukhulu.
Izimbangela zokuqaqanjelwa kwe-allergies: Kuyathakazelisa ukwazi ukuthi i-histamine namanye amakhemikhali umzimba uwavuma ukulwa nama-allergies yi-hypnotic. Ukuqwasha kubangela ukuqwasha.
Imbangela yokudonsa ngokweqile i-anemia .. Umsebenzi oyinhloko wamangqamuzana egazi abomvu ukuletha i-oksijini emaphashini iye kwezinye izitho. Lapho umuntu eba nokushoda kwamangqamuzana abomvu egazi noma ukungasebenzi kwamangqamuzana egazi, umuntu uba nesifo sofuzo futhi ngasikhathi sinye azizwe ekhathele kangangokuba angakwazi ukwenza imisebenzi yawo yansuku zonke.
Ukuphazamiseka Okuhlekisayo: Kwabesifazane, ukwehla kwe-estrogen ezimeni eziningi kungaholela ekunciphiseni isisindo nokukhathala.
Bukela le vidiyo ukuthola imininingwane engaphezulu ngembangela yokudangala.
برچسب‌ها:homeland, kamala harris, kolomela mine, komela, komela audio, komela billnass, komela cream, komela cream uses, komela face cream, komela face cream in hindi, komela govender, komela lyrics, komela mp4 download, komela tablet, komela tablet uses, komela tx, komela tx face cream, komela tx face cream hindi, komela tx face cream review, komela tx face cream uses
Previous Previous post: Cauzele somnolenței – Cunoașteți cauza și tratați-o
Next Next post: 眠気の原因-原因を知り、治療する